Kedu ihe bụ Slogan? Ede nke ụdị ndị a ma ama na Mbido ha | Martech Zone
At DK New Media, okwu ndu anyi bu na Anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka ịba ahịa ahịa ha. Ọ dabara n'ọtụtụ ọrụ anyị na - enye - site na ịmụrụ ngwaahịa, mmepe ọdịnaya, njikarịcha ahịa n'ịntanetị… ihe niile anyị na - eme bụ ịchọpụta ọdịiche dị na atụmatụ ma nyere ụlọ ọrụ aka mejupụta oghere ndị ahụ. Anyị agabeghị iji nweta akara ụghalaahịa, mepee vidiyo vidiyo ma ọ bụ na-agbakwunye jingle… mana ozi na-atọ m ụtọ.
Kedu ihe bụ Slogan?
Nkwupụta okwu bụ ụkpụrụ a na-echefu echefu ma ọ bụ ahịrịokwu a na-eji eme ihe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, azụmahịa, okpukpe, na ndị ọzọ dị ka nkwughachi nke otu echiche ma ọ bụ nzube. Okwu slogan sitere slogorn nke bụ Anglicisation nke Scottish Gaelic na Irish sluagh-ghairm tanmay (sluagh “ndị agha”, “usu” + gairm “mkpu”). A na-akpọkarị okwu ire ahịa mkpado na United States ma ọ bụ eriri na UK. Ndị Europe na-eji okwu ndị a eme ihe ihe ndepụta, aha, mbinye aka ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ.
Onwere onye chetara okwu anyi? Obi abụọ… Amaghị m na onye m na-azụ ahịa maara na ọ bụ okwu anyị! N’ezie, ọ̀ dị onye chetara okwu onye ọ bụla? Na infographic n'okpuru si BestMarketingDegrees.org, ha na-eje ije site na ọtụtụ n'ime ndị a ma ama ụdị na ha slogans - na m na o siri ike ghọtara ọ bụla. Echere m na ụfọdụ dị ezigbo mma… ọ bụghị naanị n'ihi na ha na verbiage ma n'ihi subliminal ozi ọ na-ekwu ma ọ bụ na-agbalị ikwu. Ọ bụ ezie na njirimara na aha na-eme ka amata ụlọ ọrụ, okwu okwu nwere ike ikwu okwu karịa na ọdịbendị na nsonaazụ ha rụpụtara maka ndị ahịa ha.
Dịka ọmụmaatụ, McDonald's na-alụ ọgụ dị egwu nke ọgụ - site na ụlọ ọrụ nri, site na ndị ngagharị iwe ụgwọ kacha nta, yana site na mmegharị ụlọ ọrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, M na-achọ ya '! okwu a na-ese onyinyo doro anya. Ndị na-azụ ahịa na-ahụ ya n'anya, ndị ọrụ were ya '(yana ụfọdụ ndị na-ere ngwaahịa bụkwa). Ọ bụ okwu zuru oke iji lụso ajọ ọnọdụ ha ọgụ na ụbọchị ha. Gbakwunye agba ha na-enwu gbaa, ụlọ ahịa dị ọcha, na ihe ọkụkọ dị egwu - na onye ọ bụla gbagoro n'okwu a mere nnukwu ọrụ.
Nke a gosipụtara slogans na mgbanwe ha maka akara ama ama dịka FedEx, Verizon, Maxwell House, De Beers, Avis, Nike, Las Vegas, Wendy's, Burger King, McDonald's, Pepsi na Coca-Cola.
Tags: echicheakwukwo ndumbọnburger ezeazọrọcoca-colaDe Beersmmalite nke slogansama amaFedExlas vegasMaxwell HouseMcDonaldnikeịkwụ ụgwọpepsimbinye akaokwueririmkpadoverizonNkechigịnị bụ slogan